News Collection: न्युड हुन चाहनेको खोजी !
न्युड हुन चाहनेको खोजी !
पछिल्लो प्रोजेक्ट 'किन किन'का लागि निर्देशक उकेश दाहाललाई दाँतबाट पसिना आइरहेको हुनुपर्छ । अघिल्लो चलचित्र 'पलपलमा'भन्दा पनि बोल्ड हुने ठानिएको पछिल्लो सिनेमा उनका लागि महंगो सावित भैरहेको छ । 'किन किन'का लागि उकेश चलचित्रमा नाङ्गिन तयार हुने युवतीको खोजीमा छन् तर पाइरहेका छैनन् । सुनिएअनुसार उकेशले यो जिम्मा अर्का निर्देशक आलोक नेम्वाङलाई दिएका छन् । किनभने पछिल्लो प्रोजेक्टको कथा यस्तो छ जहाँ एक साहित्यकार नग्न युवतीको श्वैरकल्पनामा रमाउँछ र आख्यान लेख्छ ।
'यसका लागि कास्टिङ डिरेक्टिङ गरिरहेको छु' उकेशले मेरोसिनेमासँग भने 'सामान्य हिरोइन त पाउन मुस्किल भएको यो बेलामा नाङ्गिन को तयार होला र खोइ ?' यसका लागि उनले 'पलपलमा' हिरोइन सुजाता सिटौलासँग पनि एप्रोच गरेका थिए तर उनले ग्रीनसिग्नल देखाइनन् । त्यसपछि उनलाई पर्‍यो फसाद । 'मलाई लाग्दैन कि कुनै नायिकामा त्यो आकर्षण छैन' उकेश भन्छन् 'तर मैले यो भूमिकाका लागि नयाँ फेस चाहिरहेको छु ।' यही दृश्यका कारण पछिल्लो प्रोजेक्ट पनि 'एडल्ट' सर्टिफिकेटधारी हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
चलचित्रमा साहित्यकारको भूमिकामा छन् महानायक राजेश हमाल । करिश्मा उनको अपोजिटमा छिन् । कर्म र राज तिमिल्सना पनि देखापर्दैछन् । अहिले प्रीप्रोडक्सनमा काम भैरहेको सिनेमामा उकेश स्वयमले पटकथा लेखिरहेका छन् । के यी ठिटा निर्देशकले नाङ्गिन तयार हुने भेटाउलान त ?